‘Kayizwa sidalwa i-Nigeria,’ - u-Stuart Baxter | News24
‘Kayizwa sidalwa i-Nigeria,’ - u-Stuart Baxter
UMQEQESHI weBafana Bafana omusha kodwa osebuya ihlandla lesibili, uStuart Baxter uqale kahle ngokuhlula izikhokho zase Africa nezikhuluma kakhulu i-Nigeria ngo 2 - 0 emdlalweni wokuhlungela i-Africa Nations Cup.
Lomdlalo phela udlalelwe ekuhambeni nasenkundleni ethiwa kuse Godswill Akpabio International Stadium, e-Nigeria.
Lomqeqeshi akayidlanga nje i-Nigeria ekhaya kodwa uqophe umlando ngokudla lelizwe okokuqala emncintiswaneni osemthethweni.
Phela lelizwe elimaphakathi ne-Africa laziwa njengezinye sezikhokho zebhola kulelibalazwe futhi nokuhlale kuklodelwana nomzansi kusekude ukuphela.
Phela kuzokhumbuleka ukuthi ngo-1996 kwi-Africa Cup of Nations neyayibanjelwe eMzansi, neBafana Bafana eyagcina isidle umhlanganiso, ama-Nigerians ahlale athi ukuba ayekhona ngabe oshampeni abalibonanga elidlalayo.
Kodwa-ke izikhulu eziningi ze-Safa zihlala zithi ukubhongela emswanini nje komonase abayi-Nigeria.
Imenenja yeqembu uSolly Phasha uthe ibhola laseAfrica lihlala linepolitiki yalo ebhedayo, futhi abahlale nje sebevuma ukuthi uMzansi ubadlile futhi nalomlando omdala usushintshile.
“Phela i-Nigeria ihlala ithi iBafana Bafana ayikaze iyidle emidlalweni noma-ke emqudelwaneni osemthethweni. Mina ngiyazi ukuthi sake sabadla kwi-Nelson Mandela Challenge, kodwa kubona noma lokhu kwathathwa njengomdlalo wesihle,” kusho uPhasha.
Lomqeqeshi uthi ujabulile ukuthi uqale ngewini enkulu nebalulekile futhi kumchazile.
“Phela bekubalulekile ukuhlula i-Nigeria kimina njengomqeqeshi osanda kuthatha izintambo, nomake sengibuya isibili. Futhi ukudla i-Nigeria kusho lukhulu kuthina njengoMzansi,” kusho uBaxter.
UBaxter uncome kakhulu abadlali ngendlela abadlale ngayo nabatshengise ngayo isibindi.
Sekuwumlando omusha-ke manje ukuthi iBafana Bafana ithathe iminyaka engamashumi amabili nane (24) ukukwazi igcine ihlule lezitha, amaSuper Eagles, emdlalweni nasemncintiswaneni osemthethweni.
Umdlali weBafana Bafana nobekade eyiphela endlebeni uTokelo Rantie ushaye igoli lokuqala loMzansi ngesiwombe sesibili.
Igoli lesibili loMzansi lishaywe umdlali weMamelodi Sundowns noshisayo kulezinsuku uPercy Tau sekusele nje imizuzu eyishumi kuphele umdlalo.
Izazi zebhola e-Africa zithi ama-Super Eagles kufanelwe mhlambe ukuthi axolelwe ngoba asanda kuqala ukwakha iqembu elisha.
Amabhuku emilando akubeka kucace ukuthi uBaxter akayizwa i-Nigeria futhi uhlala enalo icebo lokubadla.